CSUF - Cal ပြည်နယ်ဖူလာဓာတ်ပုံလှည့်လည်
Cal State University တွင်ဖူလာ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
လေ့ CSUF သို့မဟုတ် Cal ပြည်နယ်ဖူလာအဖြစ်ရည်ညွှန်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ဖူလာက CSU စနစ်အကြီးဆုံးကျောင်းက (စေ 37,000 ကျော်ကျောင်းသားများတစ်ဦးကျောင်းအပ်နှင့်အတူအများပြည်သူတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည် Long Beach နဲ့ Northridge အလားတူအရွယ်အစားများမှာ) ။ 1957 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, CSUF တစ်ချိန်ကအရှေ့မြောက်ဘက်ဖူအတွက် Citrus အာရှရပင်ဘာပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကျောင်းသည်အရောင်များကိုရေတပ်ပြာ, လိမ္မော်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဖြစ်ကြသည်။
CSUF 120 ကျော်ဘွဲ့ဘွဲ့, 118 မာစတာရဲ့ဒီဂရီနှင့်၎င်း၏ရှစ်ကျောင်းများအတွင်း3ပါရဂူဒီဂရီကမ်းလှမ်း: အအနုပညာကောလိပ်; စီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်စတီဗင် G. အ Mihaylo ကောလိပ်; ဆက်သွယ်ရေးကောလိပ်; ပညာရေးကောလိပ်; အင်ဂျင်နီယာနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏ကောလိပ်; ကနျြးမာရေးနှင့်လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောလိပ်; Humanities နှင့်လူမှုသိပ္ပံကောလိပ်; သဘာဝသိပ္ပံနှင့်သင်္ချာကောလိပ်။
CSUF ရဲ့အားကစားအသင်းများကိုပု NCAA ရတိုင်းကျွန်မ Big အနောက်ညီလာခံအတွင်းယှဉ်ပြိုင်။ CSUF ကောင်းစွာ 35 နှစ်လွန်ခဲ့သော NCAA ရတိုင်းကျွန်မရန်၎င်း၏သော induction ကတည်းကတစ်ဦးဆုံးရှုံးရာသီမရှိခဲ့ဘူးသည့်၎င်း၏ဘေ့စ်ဘောအသင်းများအတွက်လူသိများသည်။ titan ဘေ့စဘော 16 ကောလိပ်ကမ္ဘာ့ဖလားစီးရီးအတွက်ကစားထားပြီး4အမျိုးသားရေးချန်ပီယံရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအားကစားအသင်းများစုပေါင်းအဆိုပါဖို့အတွက် Titans တွေကအဖြစ်လူသိများကြသည်။
CSUF မှာစီးပွားရေး Mihaylo ကောလိပ်
CSUF မှာစီးပွားရေး Mihaylo ကောလိပ်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
စီးပွားရေး၏ Mihaylo ကောလိပ်ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်အကြီးဆုံးအသိအမှတ်ပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကျောင်းသည်ကျောင်းတစ်ခု $ သန်း 30 သောဆုကြေးဇူးကိုအောက်ပါစတီဗင် Mihaylo, Crexendo စီးပွားရေး Solutions ၏ CEO ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အမည်ရှိ၏။
Mihaylo လက်ရှိစာရင်းကိုင်, စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်, ဘဏ္ဍာရေး, သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ & ဆုံးဖြတ်ချက်သိပ္ပံ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေး, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စျေးကွက်အတွက်ဘွဲ့နှင့်ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီပရိုဂရမ်များပေးထားပါတယ်။
CSUF မှာ Pollak စာကြည့်တိုက်
CSUF မှာ Pollak စာကြည့်တိုက်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
ကျောင်းဝင်း၏ဗဟိုအနီးတည်ရှိပြီး Pollak စာကြည့်တိုက် CSUF ရဲ့အဓိကစာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်သည် 1959 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပေမယ့်, ကတရားဝင်တစ်ဦး $ 1 သန်းလှူဒါန်းအောက်ပါ 1998 ခုနှစ်အဆိုပါ Paulina ဇွန်လနှင့်ဂျော့ခ်ျ Pollak စာကြည့်တိုက်အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအဆောက်အဦးသန်း 1 ကျော်စာအုပ်တွေနဲ့ 8000 အမြင်အာရုံမီဒီယာ collection များကိုရရှိထားသည်။
Pollak စာကြည့်တိုက်ရုပ်ပြစာအုပ်များ, ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရုပ်ရှင် Scripts, ရုပ်ရှင်ပိုစတာနှင့်ပျော့ဖတ်မဂ္ဂဇင်းပါဝင်သောလူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှု၏မော်ကွန်းမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ Cartography များ၏သမိုင်းများအတွက်ရွိုင်း V. Boswell စုစည်းမှုစာအုပ်များနှင့်လက်ကမ်းစာစောင်များ cartography ၏သိပ္ပံပညာ၏သမိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်းအဖြစ်, ကမ္ဘာ၏ 1000 ကျော် Pre-1901 မြေပုံပါဝင်သည်။
CSUF မှာ titan ကျောင်းသားယူနီယံ
CSUF မှာ titan ကျောင်းသားယူနီယံ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
ကျောင်းဝင်း၏အနောက်ဘက်အဆုံးတွင်, Titan ကျောင်းသားယူနီယံ CSUF ရဲ့ကျောင်းသားအပန်းဖြေနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအဘို့အအချက်အချာအဖြစ်ကျောင်းသားန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ TSU တိုဂိုရဲ့, Panda Express ကို, ဘာဟာလတ်ဆတ်က The လတ်ဆတ်တဲ့မီးဖိုချောင် (All-အော်ဂဲနစ်သတ်သတ်လွတ်နှင့်သက်သတ်လွတ်), အဆိုပါဖလား (ကကိတ်မုန့်), နှင့် The Yum, သေးငယ်တဲ့စတိုးဆိုင်အပါအဝင်စားနပ်ရိက္ခာရွေးချယ်စရာတစ်ခုအမျိုးစုံရရောနှောပေးထားပါတယ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် TSU ၏ပိုပြီးလူကြိုက်များ features တွေထဲကတစ်ခု, သတင်းအချက်အလက်နှင့်န်ဆောင်မှုများ၏ရုံး Disneyland နှင့် Knotts Berry ဟာလယ်ယာအပါအဝင်ဒေသခံဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများနှင့်ဆွဲဆောင်မှု, များစွာသောဖို့တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးလျှော့စျေးလက်မှတ်အရောင်းအစီအစဉ်များနှင့်အတူကျောင်းသားများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
CSUF မှာ titan Bowl နှင့်ဘိလိယက်
CSUF မှာ titan Bowl နှင့်ဘိလိယက်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
တစ်ခုကရှစ်လမ်းသွားဘိုးလင်းလမ်းကြားနှင့်ဘိလိယက် / Arcade အခန်းထဲမှာ Titan ကျောင်းသားယူနီယံ၏မြေအောက်ခန်းတွင်တည်ရှိသည်။ titan Bowl & ဘိလိယက်မြေအောက်ခန်းကလပ်လေထုသို့လှည့်သော "Lightning လမ်းကျဉ်းများ" တိုင်းစနေနေ့ညဥ့်အပါအဝင်ကျောင်းသားများ, မှအမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများပေးထားပါတယ်။ အကွိမျမြားစှာပြိုင်ပွဲဂိမ်းကစားခြင်း, ဘိလိယက်, စားပွဲတင်တင်းနစ်နှင့်တက္ကဆက် Hold'em များအတွက်တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးကျင်းပကြသည်။
တစ်ဦးကက Round စားပွဲတင်ပီဇာစားသောက်ဆိုင်စားသောက်ဆိုင်ရဲ့မျိုးစုံပြားမျက်နှာပြင်ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်အားကစားကြည့်နေစဉ်ကျောင်းသားများကိုဂန္အားကစားဘားအစားအစာခံစားနိုငျရှိရာဘိုးလင်းလမ်းကြားမှလာမယ့်တံခါးကိုတည်ရှိသည်။ အရက်ကျောင်းသားများကို 21 နှင့်တက်ဘို့ရရှိနိုင်ပါသည်။
Cal ပြည်နယ်ဖူလာမှာ titan အရောင်းဆိုင်များ
Cal ပြည်နယ်ဖူလာမှာ titan အရောင်းဆိုင်များ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
အဆိုပါ Titan ကျောင်းသားယူနီယံမှ ဆက်လက်. Titan အရောင်းဆိုင်များဖတ်စာအုပ်များ, နည်းပညာ, ကျောင်းထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်တက္ကသိုလ်အဝတ်အစားများနှင့်လက်ဆောင်များ၏ full-service provider ကဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနှစ်ထပ် 30000 စတုရန်းမိုင်။ ပေ။ စက်ရုံအိမ်မှာပထမဦးစွာခရက်ဒစ်ယူနီယံ, အမေရိကန်ဘဏ်နှင့်လည်းဖြစ်ပါတယ် "ဖျော်ရည်ဒါဟာ Up ကိုအေးခဲဒိန်ချဉ်။ " အဆိုပါ titan ကျောင်းသားသမဂ္ဂနှင့် Langsdorf ခန်းမအတွင်းရှိအကျဉ်း Stop အတွက် Yum: titan အရောင်းဆိုင်များလည်းကျောင်းဝင်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးနှစ်ခုအဆင်ပြေစတိုးဆိုင်များရှိပါတယ်။
CSUF မှာဝိဇ္ဇာ Center ကဖျော်ဖြေ Clayes III ကို
CSUF မှာဝိဇ္ဇာ Center ကဖျော်ဖြေ Clayes ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
ဝိဇ္ဇာ Center ကဖျော်ဖြေအဆိုပါ Clayes CSUF ၏အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစင်တာကိုနှစ်စဉ်ပေးသောနှစ်ဦးစလုံးအိမ်ရှင်ကခုန်, ဒရာမာ, နှင့်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲအတွက် Little ကပြဇာတ်ရုံနှင့် Meng ဖျော်ဖြေပွဲခန်းမမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ 2008 ခုနှစ်တွင်အဆိုပါဖျော်ဖြေဝိဇ္ဇာ Center ကအဆိုပါယောသပ်သည် AW Clayes III ကိုကုသိုလ်ဖြစ် Trust ၏ Trustees ဖြင့် $5သန်းပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုအောက်ပါယောသပ်သည် AW Clayes III ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အမည်ရှိ၏။
Cal ပြည်နယ်ဖူလာမှာဆက်မက်ကာသီခန်းမ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
ဆက်မက်ကာသီခန်းမသဘာဝသိပ္ပံနှင့်သင်္ချာ၏ကောလိပ်မှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါကျောင်းသည်ဇီဝသိပ္ပံ, ဓာတုဗေဒ & ဇီဝဓါတုဗေဒ, ဘူမိဗေဒသိပ္ပံ, သင်္ချာ, ရူပဗေဒနှင့်သိပ္ပံပညာရေးအတွက်အစီအစဉ်များကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
CSUF မှာကျောင်းသားကျန်းမာရေးနှင့်တိုင်ပင်ရေးစင်တာ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
အဆိုပါကျောင်းသားကျန်းမာရေးနှင့်တိုင်ပင်ရေးစင်တာ CSUF ကျောင်းသားများအတွက်ကျောင်းဝင်းအပေါ်အဓိကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစက်ရုံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစင်တာ Optometry, မီးယပ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး, ဆေးဝါး, ကျန်းမာရေးပညာရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်ကုသမှုအပါအဝင်အများအပြားပြည့်စုံန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
CSUF မှာအင်ဂျင်နီယာနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏ကောလိပ်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
ပြည်တွင်းစစ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာ, ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ, စက်မှုအင်ဂျင်နီယာနှင့် Software များအင်ဂျင်နီယာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာနှစ်ခုအွန်လိုင်းအစီအစဉ်များ: ကျောင်းသားကျန်းမာရေးနှင့်တိုင်ပင်စင်တာ, အင်ဂျင်နီယာများ၏ကောလိပ်နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံငါးဌာနဒီဂရီကမ်းလှမ်းကပ်လျက်။
ကောလိပ်များ၏ကျောင်းသားများ ARPA NET နောက်ပိုင်းမှာအာကာသယာဉ်မှူးပညာများအတွက်အင်စတီကျု, လေကြောင်းသိပ္ပံအတွင်းသုတေသနများတိုးအပေါ်အာရုံစိုက်တဲ့တနိုင်ငံလုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ အမျိုးမျိုးသောသုတေသနပြုအခွင့်အလမ်း Intelligent စက်ရုပ်မြေပြင်မော်တော်ယာဉ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဘူမိအင်ဂျင်နီယာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပါအဝင်အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများ, မှရရှိနိုင်ပါသည်။
CSUF မှာကျောင်းသားအပန်းဖြေစင်တာတွင်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
အဆိုပါကျောင်းသားအပန်းဖြေစင်တာတွင်ပြုလုပ်ကျောင်းဝင်းပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်အဆောက်အဦးများထဲမှအောင်, 2007 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ $ 40,6 သန်းစက်ရုံအလေးချိန်-သင်တန်းနှင့် cardio-ကြံ့ခိုင်ရေးခန်း, multi-တရားရုံးအားကစားရုံတစ် 7,000 စတုရန်းပေမိုးလုံလေလုံရွရွပြေးလမ်းကြောင်းတစ်ရော့ခ်မြို့ရိုး, တစ်ဦးပြင်ပရေကူးကန်ပါရှိပါတယ်။
အဆိုပါအဆောက်အဦကိုလည်းအတွင်းပိုင်းအနိမ့်-emitting ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း, စက်ဘီးထိန်သိမ်း၏ installation နှင့်တစ်နှစ်လျှင် 415.000 ဂါလန်အထိသိမ်းဆည်းထားတဲ့အကျိုးရှိစွာရေစနစ်အားတူ၏များစွာသောရေရှည်တည်တံ့ features တွေထည့်သွင်း။
CSUF မှာကျန်းမာရေးသိပ္ပံနှင့်လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောလိပ်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေ့လာရေးတိုင်ပင်, ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ, လူ့န်ဆောင်မှုများ, Kinesiology, စစ်ရေးသိပ္ပံနှင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်း: ကျောင်းသားအပန်းဖြေစင်တာ, ကနျြးမာရေးသိပ္ပံကောလိပ်နှင့်လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆန့်ကျင်ဘက်ခြောက်လဌာနများအတွက်ဒီဂရီပရိုဂရမ်များပေးထားပါတယ်။ သူနာပြုများ၏ကျောင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူသီးခြားအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျောင်းရဲ့သုတေသနစင်တာများအများစုမှာကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့်လူငယ်များနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်သုခချမ်းသာအာရုံစိုက်ပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဆုံးသောမှတ်သားလောက်, အဆိုပါ Fibromyalgia & နာတာရှည်နာကျင်မှုစင်တာလေ့လာမှုများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးအရ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာတာရှည်နာကျင်မှုရဲ့သက်ရောက်မှုပညာပေးသောတိုင်းပြည်များတွင်အနည်းငယ်သုတေသနစင်တာများတစ်ခုဖြစ်သည်။
Cal ပြည်နယ်ဖူလာမှာ titan အားကစားကွင်း
Cal ပြည်နယ်ဖူလာမှာ titan အားကစားကွင်း။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
1992 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်, Titan အားကစားကွင်းကျောင်းဝင်း၏အမြောက်အဆုံးအပေါ်တစ်ဦး 10000 ထိုင်ခုံ Multi-ရည်ရွယ်ချက်အားကစားကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအားကစားကွင်းကိုမူလက (1992 ခုနှစ်တွင်အဆုံးသတ်ထားတဲ့) ကိုဘောလုံးအစီအစဉ်အတွက်ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. သဘာဝမြက်အားကစားကွင်းဟာ CSUF Titan ယောက်ျားမိန်းမတို့ရဲ့ဘောလုံးအသင်းများအဘို့အမူလတန်းအိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။
Cal ပြည်နယ်ဖူလာမှာ Goodwin ကဖျော်ဖြေမှု
Cal ပြည်နယ်ဖူလာမှာ Goodwin ကကွင်းဆင်း။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
ကျောင်းဝင်း၏အရှေ့မြောက်အဆုံးတွင်တည်ရှိသော, Goodwin ကကွင်းဆင်း CSUF ဖို့အတွက် Titans တွေကနှင့် Orange County Flyer အသေးစားလိဂ်ဘေ့စ်ဘောအသင်းများကိုမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အဆိုပါအားကစားကွင်း 1992 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်မှုများများအတွက် $ 1 သန်းလှူဒါန်းခဲ့သောသူဂျယ်ရီနှင့် Merilyn Goodwin ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်အမည်ရှိ၏။ အဆိုပါအားကစားကွင်း 3500 ကလူတစ်ဦးစွမ်းရည်ရှိပါတယ်။
Cal ပြည်နယ်ဖူလာမှာ gastronomic
Cal ပြည်နယ်ဖူလာမှာ gastronomic ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
အဆိုပါ gastronomic CSUF ရဲ့တစ်ခုတည်းသော On-ကျောင်းဝင်းထမင်းစားခန်းစက်ရုံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 565-ထိုင်ခုံထမင်းစားခန်းစက်ရုံ, ထင်းရူးနှင့် Juniper ခန်းမထဲကနေဖြတ်ပြီးတည်ရှိပြီးနံနက်စာ, နေ့လည်စာနှင့်ညစာများအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အချိုပွဲ options အမျိုးမျိုးကိုပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ gastronomic ကိုလည်းကန့်သတ်မီနူးနှင့်အတူ, 1 နံနက်တိုင်အောင်အနှောင်းပိုင်းတွင်-ညဥ့်ထမင်းစားခန်းပါရှိပါတယ်။
CSUF မှာထင်းရှူးနှင့် Juniper ခန်းမ
CSUF မှာထင်းရှူးနှင့် Juniper ခန်းမ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
အဆိုပါထင်းရူးနှင့် Juniper နေအိမ်သို့ခန်းမအဆိုပါ gastronomic ကနေဖြတ်ပြီးတည်ရှိနေကြသည်။ ဆိုရင် single နှစ်ချက်နှင့်ခြင်းသည်အတွက်အထိအိပ်ဆောင်-စတိုင်လူနေမှုနှင့်အတူထင်းရူးနှင့် Juniper ခန်းမပထမဦးဆုံးနှစ်ကျောင်းသားစံပြအိမ်ရာရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
သမ်ခန်းမရေးရာကြမ်းပြင်မှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အနုပညာဗိုလ်ကြီး၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ကောလိပ်ရတာဟာပေးသော "ဒီဝိဇ္ဇာခရိုင်," Juniper ၏စတုတ္ထကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါနေအိမ်သို့ခန်းမကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံပတ်သ က်. ကြမ်းပြင်နှင့်ဂုဏ်ပြုနှင့်ပညာရှင်များကြမ်းပြင်မှမူလနေရာဖြစ်သည်။
Big 12 ညီလာခံကျောင်းများ
ဘဝက Novena များအတွက် USCCB ရဲ့9နေ့ရက်များ
Absurdist ကဗျာဆရာယောသပ်သည် Osel နှင့်အတူစာပေနံပါတ်လွန်ကျူး
သင်ကဖူးဖြစ်ရမည်9Alternative Rock က compiler
Pictographs - ရုပ်ပုံများအဖြစ်တရုတ်ဇာတ်ကောင်
ပုလဲဆိပ်ကမ်းပေါ်တွင်ဂျပန် Attack အကြောင်းအချက်အလက်
ဆန်းစစ်ခြင်း: Continental က ExtremeContact DWS
Pokemon ရာသီ 7: အဆင့်မြင့်စိန်ခေါ်မှု
စားပွဲတင်တင်းနစ် / Ping-Pong Beginners အားဖြင့်ဖန်ဆင်းထိပ်တန်းအမှား
အခြေခံပညာဖြေရှင်းချက်ဥပမာပြဿနာအတွက် balance Redox တုံ့ပြန်မှု
One-တစ်နှစ်တာ MBA ဘွဲ့ရ Programs ကိုအတူကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးကျောင်းများ
ဘာသာစကား Etruscan အနုပညာ: ရှေးအီတလီနိုင်ငံ stylist တီထွင်
တမန်တော်ဝတ္ထု2ရက်နှင့်3"စိတျနှလုံး၏ပြစ်မှု" တွင်လူငယ်မိန်းမတွေကအဘို့အမြင်ကွင်းများ
ဂျိုဟန် Kepler - နက္ခတ္တဗေဒ
တွေ့ဆုံ Britt နီကိုးလ်
ပွငျသစျထဲတွင် (Disobey မှ) "Désobéir" Conjugate လုပ်နည်း
တပတ်ရစ်စန္ဒယား Pros & Cons
အောက်မှာ 25k များအတွက်ထိပ်တန်း5Wakeboarding လှေ
Francis Bacon အားဖြင့်အမှန်တရား၏
ဘယ်လို Empress Agrippina Younger ကအရှုပ်တော်ပုံရောမမြို့
ကာဗွန် Fizzy အသီးကိုသီးစေရန်ကဘယ်လို